Gossip - Sunday Myanmar
+959253 548 008
Sunday Online Media တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြော်ငြာများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ကြော်ငြာကိစ္စရပ်များအတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း 09253548008 သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဟဲဗီးဖြိုးကို အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ ယုန်လေး>>>>>
သွေးချင်းတို့ပွဲတော်ဆီ ၂၀၂၀ အထိမ်းအမှတ် ပွဲတွင်ပါဝင်ဖြစ်ပုံ
ကျွန်တော်က ဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဒီမှာ တိုင်းရင်းသားတွေအလှူလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီမှာ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ လာကန်ခိုင်းလို့ ကန်ဖြစ်တာပါ။ ပြီးတော့ ဒီပွဲကိုလည်း ပိုပြီးတော့ ပျော်ရအောင်လို့ ဝန်းရံပေးပါဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ အော်ရယ်ဂျင်နယ်ဂိုဏ်းစတား ဖွဲ့ထားတဲ့ အသင်းလေးက ဒီမှာ ဗမာတိုင်းရင်းသားများအသင်းဆိုပြီးတော့ ပါဝင်ဖြစ်တာပါ။
Tags: Clebrity,	Actor,	singer
အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှေ့တိုးရမလို နောက်ဆုတ်ရမလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ရွှေကြိုက စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အနေနဲ့ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်တာပါ ဆိုတဲ့ ခိုင်မြတ်သဇင်>>>>>
ရွှေကြိုကို ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ တီဗွီထဲမှာကြည့်ဖူးတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ ဘယ်သူတွေလာမယ်။ ပါမော်ဖန့်တွေ ဘယ်လိုတွေလာမယ်ဆိုတာတော့ ကြည့်ဖူးတယ်။ ဒါပေယ့် မနှစ်ကမှ ပိုပြီးတော့ စိတ်အားထက် သန်သွားတာပါ။ နောက်နှစ်အတွက် ရွှေကြိုဖောင်ထုတ်ပေးရင် ရွှေကြိုသွားလျှောက်မယ်ပေါ့နော်။ ပါခဲ့သည်ရှိ သော် မပါခဲ့သည်ရှိသော်ဆိုပြီးတော့ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်တာပါ။ တောင်ကြီးကနေ လာလျှောက်တာပါ။
Tags: Clebrity,	Actress
အနုပညာကိုချစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ သီချင်းတွေဆိုနေရရင်ကိုပျော်နေတာ သီချင်း ၃၆ ပုဒ်လောက်အေးဆေးပဲ ဆိုသေးတာပဲဆိုတဲ့ တေးသံရှင် စိုးပိုင်>>>>>>
ပွဲရာသီဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုး ဘယ်ပွဲလေးတွေမှာ ဆိုဖြစ်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး
ပွဲတွေဆိုတာတော့ တော်တော်များနေပါပြီ။ ပဲခူး၊ လက်ပံတန်း၊ မော်လမြိုင်၊ မေမြို့တို့မှာ ဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။
ငါကတော့ မရှက်ပါဘူး။ သွားကတော့ အတုစိုက်ထားတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီသွားက ပြုတ်သွားလို့လေ။ ဆိုခါနီးကျမှပေါ့နော်။ ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ မဆိုခင်မှာဖြစ်တာဆိုတော့ အသာလေးထားပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါ တယ်။ သိပ်တော့ အားမရဘူးပေါ့နော်။
ရွှေကြိုရွေးချယ်ပွဲမှာ ဆန်ခါတင် အယောက် ၈၀ ထဲမှာပါဝင်သွားတဲ့ မေလသံစဉ်>>>>
ဘယ်လို့ကြောင့် ဒီရွှေကြိုးကို ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ မေလရဲ့ ဒီအနုပညာမျိုးရိုးကကျတော့ ညွှန့်မြန်မာ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ ဦးချန်ထွန်းပေါ့နော်။ အဲ့ဒါ မေလရဲ့အဘိုးပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အနုပညာမျိုးရိုးကို ထိန်းသိမ်းချင်တဲ့အတွက်ရော နောက်ပြီးတော့ ဒီနှစ် ၁၀၀ပြည့်ရွှေကြိုးမှာ ပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် အခွင့်အလမ်းတွေလဲ အများကြီးရမယ်လို့ သိထားပါတယ်။ အဓိက အရေးကြီးဆုံးကတော့ မေလ ဝါသနာအရမ်းပါလို့ပြိုင်ဖြစ်တာပါ။
Tags: Clebrity,	singer,	Actress
မြမြအတွက် ရပ်ကွက်လုံးကျွတ် စတုဒီသာအလှူပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ညိုမင်းလွင်>>>>
မနှစ်ကတုန်းက ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရွေးချယ်လဲတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ဒီနှစ်ကတော့ ကျွန်တော့်ဆရာလုပ်တဲ့ ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် ပါဝင်ဖြစ်တာပါ။ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းလေးတွေတော့ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ရွှေကြိုးဆိုတဲ့အတိုင်း အဓိကကတော့ ပါဖော်မန့်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့အပေါ်မှာ ကြည့်လို့အဆင်ပြေတဲ့အရာက အဓိကပေါ့နော်။ ဒါကတော့ အကုန်လုံးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တော့ ဘာမှပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ဒိုင်အဖြစ်နဲ့ပဏာမရွေးပေးတာပါပဲ။
Tags: Clebrity,	Actor
အချစ်ဆိုတာကိုငယ်သူမို့မသိပါဘူးဆိုတဲ့ ကျော်ထက်အောင်>>>>	05 March 2020
ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှာမဆို ဒိုင်တစ်ယောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အမုန်းခံနိုင်အောင်ကြိုပြင်ဆင်ထားရတယ်လို့ဖွင့်ဟလာတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း>>>>>>	05 March 2020
အကြောင်းအရာတွေတူညီနေလည်းလူတိုင်းနဲ့ မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်ကနေတွေးပြီးသီချင်းတွေရေးတယ်ဆိုတဲ့ ဝေကြီး>>>>>>>	05 March 2020
ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ အနုပညာအလုပ်တွေနားထားလိုက်ရတဲ့ ရာဇာနေဝင်း>>>>	05 March 2020
ဖေဖေကတော့ နှာခေါင်းလေးလှတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ ထိပ်ထိပ်လေး>>>	05 March 2020
အကယ်ဒမီက ပရိသတ်တွေရစေချင်သလိုရခဲ့ရင် အရမ်းပျော်မှာပါဆိုတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်>>>>>	05 March 2020
ကိုယ်ကသရုပ်ဆောင်ပညာကို နဲနဲလေးမှ မတတ်တဲ့သူဆိုတော့ ကိုစိုင်းအားစိုက်ထားတဲ့ ဒီကားလေးပျက်စီးသွားမှာစိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့ ပိုးမမှီသာ>>>>	04 March 2020
About Sunday Myanmar
Enjoy the hot and latest multimedia of Myanmar and world celebrities & in depth issues in Sunday Journal, daily online or weekly publication.
Every Days Is Your Entertainment!
Contact To Sunday Myanmar
Facebook Live Stream from Sunday!
© 2020 Sunday Journal Myanmar Ltd. All Rights Reserved. Sunday® isaregistered trademark of Sunday Online Media. All contents and photos are copyright protected.
Developed With By OrientWebs!